DAAWO SAWIRRO:-Ciidamada Amniga oo Gacanta ku dhigay Shabakad Xiliyada Habeenkii dhac ka geeysan jirtay Muqdisho | Saadaal Media
DAAWO SAWIRRO:-Ciidamada Amniga oo Gacanta ku dhigay Shabakad Xiliyada Habeenkii dhac ka geeysan jirtay Muqdisho
Gudoomiyaha Degmada Hodon ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Cantoobo ayaa sheegay in ay gacanta kusoo dhigeen Shabakad Hubeeysan oo dhac u geeeysan jiray Ardayda iyo Haweenka Xiliyadda Habeenkii iyo Subaxii ah.
Cantoobo waxaa uu sheegay in Raggaani ay gacanta kusoo dhigeen Ciidamadda Amaanka xili ay dhac ka geeysanayeen Degmada Hodon Ee Gobolka Banaadir.
Gudoomiye Cantoobo ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigau Bartiisa Twitter-ka waxaa uu ku sheegay in kooxdaani ay ahaayeen shabakad ku mideeysan dhaca Bulshada,waxeeyna hateen hub iyo Mobilo ay soo dhaceen.
”Shabakad Burcad Hubeysan ah oo in badana lagu daba jiray ayeey Hay’adaha Amniga Degmada Hodan Gacanta kusoo dhigeen. Waxa aay dhac u geeysan jireen ardeyda jaamacahada iyo dumarka iyo Hooyooyinka degmada”sidaasi waxaa yiri Cantoobo
Maamulka Degmada Ee Gobolka Banaadir ayaa dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay waxaa uu soo bandhigaayay Shaqsiyaad hubeeysan oo lagu sheegay in ay Xiliyada Habeenkii ah Shacabka dhac-ugeeysanayeen,Hase’yeeshee waxaa dad badani qabaan in shabakadahaan shacabka dhaca habeenkii aana maxkamad loo gudbin oo ina adeer lagusii daayo